Safarkaygii Dooxo-guban- Cabdishakuur Heersare | Somaliland Post
Home Maqaallo Safarkaygii Dooxo-guban- Cabdishakuur Heersare
Safarkaygii Dooxo-guban- Cabdishakuur Heersare
Waxa aanu ka koobnayd laba qof. Baabuurka waxa waday Xiis Saleebaan Nuur. Waxa aanu ahayn laba qof oo sheeko-wadaag ah oo kolba arrin wada gorfaynaysay. Waxaa se aniga ii dheerayd oo kolba maskaxdaydu ku mashquulaysay meesha aanu ku soconno oo aan hore u arag. “Maxaad kala kulmi doontaa? Maxaad ku soo arki doontaan? Tolay waa deegaan noocee ah?” Weydiimahaas iyo kuwo la mid ah ayaan maskaxda iska waydiinayay.
Xiis wuxuu intaa raaciyey oo uu yidhi: “Runtii waxa aanu ku faraxannahay in aannu kugu soo dhawaynayo Dooxo-guban. Waxa aad noqonaysaa qofkii ugu horreeyey ee warbaahin ah ee dadkaa wax duuba ka socda ee halkan noogu yimaada. Runtiina taasi waxay na tusaysaa in aad tahay qof danaynaya arrimaha bulshada iyo horumarka dalkeenna. Sida aad arkayso deegaankani waa deegaanka beeralay ah. Wuxuu u dhexeeyaa gobolada Maroodijeex iyo Saaxil. Saaka markii aynu Hargeysa ka nimi waxaynu soo soconnay konton daqiiqo. Waana beertii ugu horraysay halkani wixii kalena way innaga hooseeyaan. Deegaankani wuxuu ka kooban yahay 128 bustaan. Waa deegaan ballaadhan oo beero wax-soo-saar ah. Waxa ka baxa oo lagu beeraa khudaar iyo geed-midhoodyo kala duwan. Weli lagu ma beerin hadhuudh ama Gelley, inkasta oo ay jirto digirta oo lagu beero. Laakiin haddii alle ka dhigo waa lagu talo jiraa in la beero.”